फिल्म रुचाउने राजदूतले हयाप्पी डेज युनिटलाई बोलाए दूतावास | We Nepali
नेपालको समय: १३:१८ | UK Time: 07:33
फिल्म रुचाउने राजदूतले हयाप्पी डेज युनिटलाई बोलाए दूतावास
२०७३ मंसिर १९ गते १२:३९
लन्डन । बेलायतमा छायांकन भइरहेको नेपाली चलचित्र ‘हयाप्पी डेज’ युनिटलाई लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले स्वागत गरेको छ । शनिबार दूतावास भवनमा चलचित्रकर्मीको सम्मानमा राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले रात्री भोज आयोजना गरे ।
उक्त अवसरमा नायिका प्रियंका कार्की, नायक सन्जय गुप्ता, फिल्म निर्देशक मिलन चाम्स, निर्माताहरु बी पी खनाल, विक्रम जोशी, नरेश शर्मा र डा. अशोक बन्साल, नेपालबाटै आएका सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराई, प्राविधिकहरु, मेक अप आर्टिष्ट, स्थानीय कलाकार, सपन इन्टरटेन्मेन्टकी मन्जु गुरुङ राई, प्रशान्त थापा लगायत सहभागी थिए । कार्यक्रममा राजदूतावास परिवार पनि सहभागी थिए ।
निर्माता बी पी खनालका अनुसार, अनौपचारिक कार्यक्रममा राजदूत डा. सुवेदीले आफूले हरेक नेपाली फिल्म हेर्न नछुटाउने गरेको प्रसंग उठाउंदै नेताहरु आउने जाने क्रम भइरहने तर कलाकारहरु कला, संस्कृतिका लागि समर्पित देशका गहना हुन् भन्दै प्रशंसा गरेका थिए ।
उनले बेलायतमा फिल्म बन्नु सजिलो नभएको बताउंदै दूतावासका तर्फबाट कलाकर्मीलाई सधैं सहयोग र समर्थन रहिरहने बताए ।
उक्त अवसरमा निर्देशक मिलन चाम्सले पुरा युनिटको परिचय गराएका थिए । सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराईले कविता सुनाए भने सन्जय गुप्ताले फिल्म डायलग सुनाएका थिए ।